News - Beeraha mustaqbalka - shineerka iftiinka dhirta
Sida laga soo xigtay Technavio, oo ah hay'ad cilmi baaris ku sameysa suuqa, suuqa adduunka ee nalalka koritaanka dhirta ayaa ka badnaan doona $ 3 bilyan sannadka 2020 wuxuuna ku kori doonaa xaddiga kobaca sanadlaha ah ee 12% sanadka 2020, taas oo macnaheedu yahay in codsiyada LED-ka ee koritaanka dhirta ay leeyihiin suuq aad u weyn. Iyada oo ay yaraadeen ilaha tamarta iyo yaraynta dhulka la beeri karo, doorka iyo baahida loo qabo warshadaha dhirta ayaa aad iyo aad u soo shaacbaxay - way ka takhalusi karaan dhulka waxayna soo saari karaan wax soo saar badan oo beeraha ah iyaga oo leh dhul beereed iyo biyo yaraan. Iftiinka dhirta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah, bacriminta iftiinka waxaa loo isticmaalaa halkii bacriminta kiimikada, ilo iftiin dabiici ah ayaa loo isticmaalaa halkii iftiinka qoraxda.Tani waa fure u ah helitaanka warshad dhir badan oo wax soo saar leh oo bey'adeed u fiican.
Iftiiminta dhaqameed ee dhaqameed waxaa badanaa lagu gaaraa iyadoo la adeegsanayo laambadaha sodium ee cadaadiska sarreeya leh, laambadaha halbeegga birta ah, iyo laambadaha dabka ka baxa. Ilahaan iftiinka ah waxaa lagu xushay iyadoo loo eegayo isha biniaadamku la jaanqaadka iftiinka, dhirtuna waxay leedahay spectra nuugid gebi ahaanba ka duwan, taas oo keenta in inta badan tamarta ilaha dhaqameed ee dhaqameed la khasaariyo, iyo kor u qaadista koritaanka dhirta ayaan si muuqata u muuqan.
Chlorophyll absorption spectra Indhaha Bini'aadamka qallooca dareenka muuqaalka muuqaalka
Spectra si kor loogu qaado koritaanka dhirta ayaa inta badan ku urursan nalka buluuga ah ee 450nm iyo iftiinka cas ee 660nm. Shuruudaha saamiga iftiinka cas iyo buluugga ee dhirta kala duwan iyo heerarka koritaanka dhirta kala duwan sidoo kale way kala duwan yihiin. Sababtoo ah balaastigga muuqaalka wanaagsan, LED-yada waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo muuqaalka gaarka ah ee dhirta kala duwan.
ShineOn taxanaha nalka beeraha ayaa soo saaray badeecooyin kaladuwan oo bartilmaameed ah kuna saleysan noocyada dhirta kaladuwan.
Wax soo saarka iftiinka sare ee qulqulka sawir-qaadaha.
La qabsan karo inta badan codsiyada nalalka beeraha.
Laydhka lakabka ah
Intaa waxaa sii dheer, si loo dheellitiro baahiyaha koritaanka dhirta iyo indhaha aadanaha, ShineOn waxay bixisaa muuqaal ballaadhan oo ku habboon beerista guryaha yaryar.
ANSI 3500K 7-tallaabo, Ra90, wuxuu dabooli karaa baahiyaha iftiinka maalinlaha ah, Isla mar ahaantaana, 2.1umol / J sawir-qaadista sawir-qaadista sawir-qaadista iyo saamiga casaanka iyo buluugga ah ee ku habboon ayaa dabooli kara baahida koritaanka dhirta.
ShineOn waxaa ka go'an horumarinta ilaha iftiinka dhirta oo tayo sare leh waxayna bixisaa xal dhameystiran oo loogu talagalay kor u qaadista iyo adeegsiga LED-ka ee nalalka dabka.